देशभरका खसीबोका काठमाडौं थुप्रिए, प्रतिकिलो मूल्य कति तोकियो ? » aarthikplus
वि.सं.२०७८ असोज २४ आइतवार ०९:००
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंका लागि खसीबोका काठमाडौं ल्याइपुर्याएको छ । कम्पनीले बिहीबार दाङ र हेटौंडाबाट पहिलोचरणमा ७३० वटा खसीबोका ल्याएको हो ।
उक्त खसीबोका शुक्रबारदेखि नै विक्री सुरु गरिएको खाद्य कम्पनीले जानकारी दिएको छ । खाद्यले वाग्मती प्रादेशिक केन्द्र थापाथलीबाट खसीबोका विक्री गरेको हो ।
खाद्य कम्पनीका वरिष्ठ सहायक अधिकृत ललितकुमार यादवले पहिलो चरणमा ७३० वटा खसीबोका ल्याइएको जानकारी दिए । कम्पनीले १७०० खसीबोका ल्याउने भए पनि पहिलो चरणमा ७३० खसीबोका ल्याइएको बताए । अरु खसीबोका आउने क्रममा बाटोमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
हामिले दशैंका लागि १७०० खसीबोका ल्याउने योजना छ । सोही अनुरुप पहिलो चरणमा ७३० वटा ल्याएर विक्री सुरु गरेका हौं, उनले सँग भने, बाँकी खसीबोका ढिलोमा आजसम्म आइपुग्छन् ।
कम्पनीले दशैंका लागि दाङबाट १ हजार र मकवानपुरको ७०० खसी तथा बोका ल्याउने भएको हो । कम्पनीले सबै खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र विक्री गरिने जनाएको छ । जसको लागि भेटनरी डाक्टर साथैमा राखिएको छ ।
खाद्य कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष पनि दशैंका लागि च्याङ्ग्रा भने विक्री वितरण नगर्ने भएको छ । दशैंका लागि च्याङ्ग्राको विक्री वितरण गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले अभावका कारण विक्री नगर्ने भएको हो ।
किलोमा १० रुपैयाँ छुट
खाद्य कम्पनीले जिउँदो खसीबोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिएर विक्री गरिरहेको छ । खसी किन्न कम्पनीको कार्यालय थापाथली जाने ग्राहकले किलोमा १० रुपैयाँ छुट पाउने भएका हुन् ।
खाद्य कम्पनीले जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिई प्रतिकिलो ६४० रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको हो ।
व्यवसायीद्धारा मासुको मूल्य निर्धारण
यता मासु व्यवसायीहरुले गत बिहीबार नै दशैँका लागि मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपीे आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
व्यापारिहरुले आन्द्राभुँडी राखिएको मासु प्रतिकिलो १ हजार, बोसो राखिएकाको १ हजार २०० र ह्याकुलासहित रोजाइ (ग्राहकले रोजेअनुसार) को मूल्य १ हजार ३०० निर्धारण गरिएको हो ।यस्तै कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३०० तथा रागाँ र बङ्गुरको मासु ५००/५०० तोकेका छन् ।
राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घले फूलपातीका दिनदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
बंगलादेश बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा,म हिला लघुवित्तको बम्पर लाभांश घोषणा, बोनस कति ? नगद कति ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने...
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार ०९:५०
सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा...